बढ्यो अमेरिकी डलर, युएइ दिराम र मलेसियन रिँगिटको भाउ, हेर्नुहोस् अन्य देशको कति पुग्यो ? - News20 Media
July 11, 2020 July 11, 2020 N20LeaveaComment on बढ्यो अमेरिकी डलर, युएइ दिराम र मलेसियन रिँगिटको भाउ, हेर्नुहोस् अन्य देशको कति पुग्यो ?
काठमाडौ : आज नेपाली बजामा शनिबार अमेरिकी डलर, युएइ दिराम तथा मलेसियन रिँगिटको विनिमयदर उकालो लागेको छ । त्यस्ते आज मेरिकी डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ३ पैसा तथा बिक्रिदर १२० रुपैयाँ ६३ पैसामा झरेको छ।त्यस्तैगरी आज । साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ।
आज शनिबार युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रिदर १ सय ५२ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको यस्तैगरी आज कुवेती दिनार एकको खरिददर ३८९ रुपैयाँ ८३ पैसा तथा बिक्रिदर ३९१ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ। आज असार २७ गते मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ १३ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ६८ पैसा छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ।
भने आज यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३५ रुपैयाँ ५४ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३६ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ। आज शनिबार बहराईन दिनार एकको खरिददर ३१८ रुपैयाँ २९ पैसा तथा बिक्रिदर ३१९ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ १३ रहेको छ।
ओलीसँग हात मिलाएको २४ घण्टा नबित्दैँ वामदेव युटर्न, यस्तो अडान लिएपछि माधव नेपाल दंग !
July 3, 2021 N20
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने पक्का : नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने दुवै सम्भावना कम, अब के होला ?
देउवा र निधिबीच बाँझाबाँझ, यस्तो छ रहस्य